आफूमा आएको पैसालाई कमी हुन नदिन पैसा बोक्ने थीलैमा सधै यस्ता चिज मध्ये कुनै चिज राख्नुहोस, मालामाल हुनेछ - Mero Khabar Nepal
आफूमा आएको पैसालाई कमी हुन नदिन पैसा बोक्ने थीलैमा सधै यस्ता चिज मध्ये कुनै चिज राख्नुहोस, मालामाल हुनेछ
धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला र? जसको लागि मानिसहरू कडा मेहेनत गर्न पछि हट्दैनन ।
तर लाखैा कोशिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन । समुद्र शास्त्रमा यो बताइएको छ कि केही खास चीज यदि गोजीमा राख्नाले धन सम्पति टिकाउ हुने गर्दछ। यी पाँच चीजहरू गोजीमा राख्नाले तपाइको गोजी कहिले खाली हुने छैन।
आफ्नो गोजीमा कमलको दाना अर्थात् कमलको बिजको दाना राख्नाले तपाइसग पैसा को कमि कहिँले हुने छैन। माता लक्ष्मीको कृपा सधैं सधैं रहिरहने छ ।
पर्समा अक्षता राख्नाले पनि बडि भन्दा बडी फाइदा हुन्छ। भनिन्छ कि पर्समा थोरै चामल राख्नले फजुल खर्च रोकिन्छ।
गोजीमा श्रीयंत्र राख्नले पैसा सग जोडिएका सबै काम कुराहरुमा फाइदा मिल्दछ। यसलाई सधै आफ्नो पर्स मा राख्नुहोस।
पर्समा सानो ऐना राख्नाले पनि धनको बचत हुन्छ। तपाइको पैसा फजुलमा खर्च हुने छैन र साथै जागिरमा पनि बढुवा हुन्छ।
यो पनि पढ्नु होस :-घरमा नराख्नुहोस् यी ७ चीज, आउन सक्छ आर्थिक संकट
तपाईंले फुटेका गिलास र प्लेटले काम चलाइरहनुभएको छ भने वास्तुदोष निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ । यस्ता चीजलाई घरमा राख्नै हुँदैन किनकि यिनीहरूको नराम्रो प्रभाव पर्छ । घरकी महालक्ष्मी रिसाउने कारण बन्छ यो।
टुटेफुटेका वस्तु एकदिन न एकदिन त फाल्नुपर्छ नै । घरमा साँचेर राख्दा बेकारमा वास्तु बिग्रन्छ । त्यसैले भाँचिएका र टुफेटेका सामान घरबाट हटाइहाल्नुस्।
यी कुराले हामीलाई सफलतामा अवरोध ल्याउछ ! पढेर शेयर गर्नुहोला
सुरुवाती यौन सम्पर्कमा के समस्या आउन सक्छ ?
पाँचथर हत्याकाण्ड कुकुरले देखायो चमत्कार , भेट्टायो ठुलो प्रमाण
Prevनेपालमै पहिलोपटक एकैसाथ चार बच्चाको जन्म, आमा र बच्चाको अवस्था कस्तो छ ?(भिडियोसहित)
Nextब्वाइफ्रेन्डले मोटी भनेर छोडेपछि ‘सुजनाले घरमै घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी’ ! कसरी भयो सम्भव ? हेर्नुहोस यस्तो छ तरिका